Badhasaabka Saaxil oo xilkii laga qaaday & Xamarje Oo Badhasaabka Maroodi-jeex lagu celiyay | Somaliland.Org
Badhasaabka Saaxil oo xilkii laga qaaday & Xamarje Oo Badhasaabka Maroodi-jeex lagu celiyay
December 21, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)-Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa caawa xilkii ka qaaday badhasaabka Gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) isla markaana dib ugu magacaabay xilkii Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi (Xamarje).
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed caawa uu soo saaray Afhayeenka Madaxtooyadda Somaliland Md. Axmed Saleebaan Dhuxul, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa digreeto uu caawa soo saaray waxa uu ku magacabay labada badhasaab ee Gobolada maroodi-jeex iyo saaxil, waxaanu sidoo kale digreetadaasi uu xilkii kaga qaaday Badhasaabkii Gobolka Saaxil.
Madaxweynuhu Markuu Arkay:Qodobka 90aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;
Markuu Arkay:Qodobka 110aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;
Markuu Tixgeliyay:Ahmiyadda ay Gudoomiyeyaasha Gobolladu u leeyihiin dhismaha Qaranka;
Markuu Aqoonsaday:In baahi loo qabo buuxinta jagooyinkan;
Markuu La Tashaday:Madaxda ay hawshani khusayso;
Markuu ku Qancay: Aqoontooda, Kartidooda iyo hufnaantooda shaqo;
1.	In Mudane, Axmed Cumar X. Cabdilaahi (Xamarji), laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex ee Jamhuuriyadda Somaliland
2.	In Mudane, Cali Maxamed Cilmi, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Saaxil ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Mudane,Xilalka Qaranka ayey dabcigiisa tahay in uu meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo, wakhtigan xaadirka ahna waxa aan gartay in xilkii Gudoomiyaha Gobolka Saaxil aan kaa qaado una magacaabo masuul cusub oo xilkaasi guta.
Sidaa darteed, waxaan ku farayaa in xilkaa aad ku wareejiso Mudane, Cali Maxamed Cilmi oo aan u soo magacaabay in uu noqdo Gudoomiyaha Gobolka Saaxil.
Waxaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo ay warqadani ogaysiin ugu socoto la farayaa in uu labada masuul u kala wareejiyo xilka Gudoomiyaha Gobolka Saaxil.”
Previous PostBadhasaabka Awdal oo kormeeraya degmooyinka gobolka ee Goleyaasha deegaanku isku dooranayaanNext PostBadhasaabka Salel Oo Daadifeeyay 10 Xildhibaan Oo Guri Saylac ku yaala isku doortay	Blog